Uwe ejiji ejiji nke nwanyi - ogologo, mkpirisi, ikpere, na sintepon, okpukpu abuo, kpochapu, na zipa, oge ochie, na ihe ha ga-eyi?
Uwe Pritalennoe - oge oyi na-ere, oge nke oge na ihe oyiyi na ha
Uwe a kwadebere ga-abụ ngwọta dị mma iji mesie ọnụọgụgụ ahụ na waistline. Ọ dị mma maka ịmepụta ụbụrụ ndị inyom na ndị mara mma, ebe ọ bụ na e ji ụdị dịgasị iche iche mara ya, nke ga-ekwe ka onye ọ bụla fashionista họrọ nhọrọ maka uto gị.
Okpokọta a na-eji aka kpuchie 2018
N'ime nchịkọta nke ọtụtụ ndị na-emepụta ihe, a na-enye uwe nwanyị. Ọ na-apụta n'ọdịiche dịgasị iche iche nke ụdị, n'etiti atụmatụ ha pụrụ iche ị ga-ahụ ihe ndị a:
Oge gboo bụ ụdị nke ịkpụ akacha, nke a na-ejikọta ọnụ na ịdị mfe;
enwere ike ime ka onyinyo ahụ dị ka nwanyị ma ọ bụrụ na ị na-eji ihe atụ na ala nwere okpukpu abụọ yiri akwa lush. Otú ọ dị, ekwesịrị ịdeba na ọ nwere ike ọ gaghị adabara ndị nwe lush, n'ihi na ọhụụ na-enye olu;
A na-ejikarị uwe a kwadebere iji mepụta ụta mara mma, ma enwere ike iji ya mee ihe kwa ụbọchị . Nke a bụ uwe elu ụwa nile, nke a na-ejikọta ya na ọtụtụ ihe ndị e ji akwa uwe;
iji mesie akụkụ elu ahụ ga-enyere nkọwa ụfọdụ aka, dịka ọmụmaatụ, akpịrị volumetric, ajị anụ, mkpuchi nke ụdị mbụ, uwe elu, mma na nnukwu bọtịnụ;
Na mgbakwunye na imesi ike n'úkwù ahụ ga-enyere eriri buru ibu, nke nwere ike ịdịka ma ọ bụ dị iche iche na agba.
Uwe uwe nwanyi oyi
Maka oge oyi, uwe oyi dị mma nke zuru oke. N'etiti àgwà ya iche nwere ike depụta ihe ndị a:
ọtụtụ ngwaahịa na-eji ajị anụ, nke nwere ike ịnwe na mkpuchi, olu akwa, akpa, eriri, akpa;
a na-eji ụdị mkpuchi dị iche iche eme ihe, karịsịa ewu ewu bụ uwe dị mma na sintepon, nke dị ọkụ ma n'otu oge ahụ ọkụ;
bụ ndị na-achịkwa ngwaahịa ndị nwere ogologo oge elekere ma ọ bụ karịa nke na-ekpuchi hips ma nye nchebe ọzọ pụọ na oyi.
Oge ejiji nwanyi
Maka oge opupu ihe mgbụsị akwụkwọ, uwe a na-eji mmiri eme ka ọ bụrụ nke zuru ezu. Ọ dị arọ karị karịa mbipute oyi, ọ nweghị ọkụ. A na-eji atụmatụ ndị a mara ya:
dabere na uto onye ọ bụla, a ga-ahọrọ akararị ma ọ bụ na-egbuke egbuke na-acha ọkụ dị ụtọ, na-enye ọnọdụ mmiri;
ịkpụ nwere ike ịdị mfe ma dị nkenke ma ọ bụ enwere ike ịgụta ihe dị iche iche, dịka ọmụmaatụ, na-agbanye n'ime obi, na-eme ihe nkiri ahụ;
ogologo nwere ike ịdịgasị iche site na mkpụmkpụ, na-agwụ na mpaghara nkịrị, ruo n'ogo kachasị elu n'ala.
Ụdị uwe elu dị otú ahụ dị ka uwe ejiji ejiji ejiji dị iche iche dị iche iche dị iche iche nke ụdị nwere ike ịkọwapụta nkọwa ndị a:
nwere ike ịnwe ngwugwu Bekee , olu akwa- "akwa", nhọrọ a na-eme n'ụdị ejiji, otu olu nwere ike ọ gaghị anọ kpamkpam;
ihe ndị ahụ nwere ike ịdị na-adabere, ma ọ bụ nwee ike gbadaa;
elu nwere ike ịnwe mgbidi ma ọ bụ nke a na-agba agba;
ngwaahịa ahụ nwere ike ịbụ otu nzacha ma ọ bụ okpukpu abụọ;
dịka ihe nkedo nwere ike imechi ma ọ bụ agwọ - "àmụmà";
Inye nchebe ọzọ site na ifufe na oyi ga-enyere nkọwa dị otú ahụ dị ka mkpuchi;
dị ka nwa ojii, acha anụnụ anụnụ, dị nro na ìhè, nke a bụ ọcha, agba aja aja, pink, uwe na-acha anụnụ anụnụ, ma ọ bụ na-egbuke egbuke na ọgaranya, ọ na-acha uhie uhie, aquamarine, fatịlaịza ụda ụda.
E wezụga ikike nke ejiji na-anọgide na-abụ uwe ejiji mara mma. E ji ihe ndị dị iche iche mara ya:
Ntucha nke oma nke na-emesi onu ogugu ike ma na-elekwasị anya n'imi;
laconism na enweghi ihe ndi ozo adighi mkpa;
mgbe mgbe a na-enwe ngwugwu laconic;
agba chaa chaa, ha nwere ike ịbụ ma ọ bụ ọchịchịrị ma ọ bụ ihe dị egwu.
Uwe abuba abuo
Buru ụta a na-ejide azụ ga-enyere otu nwanyị aka na-ejiji nke abụọ. Otu n'ime àgwà ya bụ:
ihe ejiri aka bọtịnụ kwadoro na ahịrị abụọ, n'ụdị ụfọdụ ọ ga-ekwe omume ịdebe ma otu ma n'akụkụ nke abụọ;
bọtịnụ na-arụ ọrụ dịka ihe eji achọpụta nke ọma, a pụrụ ime ha ma ọ bụ plastik;
a na-enye uru dị na bọtịnụ, nke dị iche na agba site na ákwà ahụ, na-eguzogide ọdịda ya ma mee ihe dị iche.
Akwa ejiji na mkpuchi
Ndị na-anọchite anya mmekọahụ, ndị na-ahọrọ ime ihe na-enweghị isi, ga-enwe ike ịchọta uwe na-eyiri uwe nke nwanyi na mkpuchi. A na-eme nhọrọ nke nlereanya ahụ dabere na oge, atụmatụ nke ọgụgụ na uto nke mmadụ. Igwe nwere ike inwe ụdị ndị a:
na-agbanye ma ọ bụ n'obosara, nke a na-eme n'ụdị uwe, na-ada n'ubu;
gbasaa ma ọ bụ mee na-enweghị ya. A na-eji ajị anụ eme ihe ma nke anụ ahụ. A na-eji ụdị ihe ịchọ mma dị otú ahụ mee ihe n'akụkụ ndị ọzọ nke ngwaahịa ahụ: na nkwụnye ego, akpa, ọnụego.
Uwe ejiji na ncha
Ọ dị mma nke ukwuu ma bụrụ nke na-enweghị ntụpọ, nke nwere nkedo zipa, akụkụ a na-arụ ọrụ ọ bụghị naanị ọrụ, kamakwa ọ bụ nzube e ji achọ. E nwere mgbanwe ndị dị otú ahụ:
Agwọ nwere ike ịchọta kpọmkwem n'etiti;
Nhọrọ ọzọ ga-abụ echiche dị n'akụkụ;
enwu bụ mbụ, nke dị diagonally.
Ihe magburu onwe ya maka oge oyi ma ọ bụ oge opupu ihe ubi ga-abụ nwanyi ejiji ejiji nke ejiji. Ọ nwere ike ịnwe ọkụ ma ọ bụ bụrụ na ọ gaghị enwe ya, a ga-eme ngwa ngwa ahụ na ọdịiche ndị a:
dị ka ụdị ụdọ, nke nwere ike dị warara ma ọ bụ n'obosara;
n'ụdị nnukwu ma ọ bụ obere squares ma ọ bụ rhombuses;
quilted nwere ike ịbụ ngwaahịa dum ma ọ bụ naanị otu akụkụ nke ya;
enwere ike ịkọwa nkọwa dị iche iche na nhọrọ ndị ọzọ ịmepụtara, dịka ọmụmaatụ, na akụkụ ndị nwere njiri.
Kedu ihe ị ga-eyi uwe dị mma?
Ụmụ agbọghọ ndị kpebiri imepụta ihe dị mma, na-ajụ: otu esi eji uwe dị ọcha? Mgbe ị na-ahọrọ ihe ndị e ji ehicha ahụ, a na-atụ aro ka ị buru n'uche oge ndị dị otú a:
Ogologo ngwaahịa a, dabere na nke a, ahọrọ akpụkpọ ụkwụ nwere obere bootleg.
Nhazi nke akụkụ elu, nke a na-adabere, ma ọ ga-ekwe omume ịhọrọ ngwa ụfọdụ ma ọ bụ ka mma ime ma ha enweghị. Ọ bụrụ na enwere mpempe ọkụ ma ọ bụ flounces dị n'ime obi, ọ ka mma ịhapụ ịgba ụda ọkụ, na-ebu égbè. Ngwunye-ngwugwu ma ọ bụ nkwụsị zuru ezu na-enye ohere iji gosipụta ihe ị na-eche n'ezoghị ọnụ ma họrọ akwa ụcha ma ọ bụ olu n'olu.
Dabere na ụdị nke ala, ọ nwere ike ịbụ ejiji ma ọ bụ skirts, ogologo oge ha tụrụ aro agaghị agafe ogologo uwe elu. Ọ bụrụ na ịhọrọ uwe ogologo ọkpa ma ọ bụ jeans, ọ ga-adị mkpa ka ị tụlee ịcha akụkụ elu. Ọ bụrụ na nke a bụ akwa uwe kwesịrị ekwesị, ị nwere ike ịkwụsị dị ka nkwekpu ruru ala, ogologo, na akwa . Ọ bụrụ na enwere mgbatị, mgbe ahụ, ọ ka mma ịhọrọ ụdị akwa akwa akwa ma ọ bụ uwe akwa.
Iji nlezianya ahọrọ uwe na-achọ uwe nwanyị dị ogologo. Isi nuances, nke bara uru ịṅa ntị, bụ ndị a:
ọkacha mma na-eyi ụdị akwa ọkpụkpụ ma ọ bụ jeans;
a na-ahapụ ụdị uwe ejiji na ejiji ọ bụla, n'ihi na ha zoro ezo kpamkpam n'ihi ogologo nke uwe elu.
Obere uwe dị mma
A na-akpọ ihe a na-ahụ maka ihe a na-ahụ maka uwe na-ekpuchi uwe. Enwere ike ịjikọta ya na ọtụtụ ihe, ihe ndị a na-emekarị maka mgbapụta na-agụnye ihe ndị a:
na akwa akwa ma ọ bụ jeans nke ụdị dị iche iche, ọ nwere ike na-adịgide adịgide na-egbuke egbuke, kpochapụwo ogologo ogologo ọkpa, gbarụrụ site na ikpere ma ọ bụ site na hip;
nke nwere ogologo ma ọ bụ okpukpu ụkwụ, ogologo ya nwere ike ịdị iche site na obere ka maxi;
a na-ahọrọ atụmatụ ụcha nke ihe na-adabere na agba nke uwe elu. A na-eji uwe na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie jikọtara ya na ihe, dịka ọmụmaatụ, oji ma ọ bụ ọchịchịrị gbara ọchịchịrị. A na-ejikwa uwe elu, ejiri igbochi agba, nwere ike ịjikọta ya na ihe eji akpa akwa nke ihe ọ bụla shades.
Kedu ụdị akpụkpọ ụkwụ ga-eyi uwe dị mma?
Iji mepụta bọọlụ na-adọrọ adọrọ na uwe dị mma, ọ dị mkpa ịhọrọ akpụkpọ ụkwụ kwesịrị ekwesị maka ya. A na-ahapụ ihe ndị na-esonụ:
Na akpụkpọ ụkwụ ọ bụla dị mkpụmkpụ ga-abịaru nso: na obere ala strok, a n'elu ikpo okwu, ihe nkedo, nnukwu ikiri ụkwụ. Ogo nke ogwe nwere ike ịbụ ihe ọ bụla, dị ala, ọkara ma ọ bụ dị elu, yiri akpụkpọ ụkwụ.
Na elongated ụdị ọ ka mma ịhọrọ akpụkpọ ụkwụ ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ na ala bootleg na ikiri ụkwụ ma ọ bụ akwa wedge.
Na-efegharị na ọnyá
Jacket na pink fur
T-uwe elu nwere ogologo aka
Akpa akpa - onye nke m ga-ahọrọ?
Denim eji ejiji maka ụmụ nwanyị dị ime
Ngwongwo si chipboard
Ụdị nke narị afọ
Ngwakọta nke Strawberry na Mint maka oyi
Kedu otu esi eji okpu mkpuchi ekpuchi okpu?
Nkwekọrịta ụwa maka ụmụ nwanyị dị ime
Egwuregwu maka mmepe nke ụbụrụ
Uru nke birch sap maka ahụ
Zucchini na anụ ndị a na-egwupụta anụ - ihe kachasị ụtọ nke ntụ ọka mbụ maka ụbọchị ọ bụla
Ntughari uche - ihe mgbaàmà
Mgbatị isi nro
Norman Ridus na Andrew Lincoln
Vitamin maka uto ụmụaka
Ụdị achịcha dị na kefir
Kendall Jenner kwadoro Blake Griffin hụrụ ya n'anya
Akwụkwọ ọgụgụ dị mma bụ ndị bara uru ịgụ maka nzụlite onwe onye
Shampoos na-enweghị sulfates na parabens - depụta